Coronavirus miparitaka be Nampiato ny fampianarana ireo sekoly tsy miankina sasany
Ady amin’ny Covid 19 any Moramanga Natolotra ofisialy ny hopitaly ao Ambohitranjavidy
Tontosa tamin’ny alatsinainy 01 jona 2020 ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny toeram- pitsaboana ao amin'ny Hopitaly annexe Ambohitranjavidy Moramanga izay toerana handraisana an’ireo olona mitondra ny tsimokaretina Covid-19 any amin’ity distrika ity,
Vahoakan’ny distrikan’i Fandriana Mifarimbona miady amin’ny coronavirus
Mifarimbona tanteraka amin’ny ady atao amin’ny tsimokaretina covid-19 mba hahatontosa ny fanamby : “Distrikan’i Fandriana lavitry ny coronavirus” ireo tsara sitra-po any amin’ity toerana ity.
Ady amin’ny coronavirus Nanafatra respirateurs 70 ny fanjakana
Misy ny ezaka mba hanaraka ny fenitra ny fitiliana. 70 ny “respirateurs” nafarana hiatrehana ny coronavirus.
Covid 19 ao Toamasina Mahazaka marary 200 ny CEFTAR Analamalotra
Ny CEFTAR Analamalotra indray no handraisana ireo marary ny valan'aretina covid-19 ao Toamasina, raha ny fampahafantarana ny sabotsy teo. Tafiditra ao anatin’izany ireo misy soritr’aretina.
Covid 19 128 no voa tao anatin’ny 3 andro
Mitotaly 826 izany ireo marary ireo hatreto. 174 ihany ireo sitrana, ka 6 vaovao izay ny 5 tao amin’ny hopitaly Morafeno Toamasina, ary 1 teny amin’ny hopitaly Manarapenitra Andohatapenaka .
Nihanitombo isa hatrany ireo olona lasibatry ny tsimok’aretina COVID 19 tamin’ity herinandro ity. Ankoatra ireo olon-dehibe dia maro ihany koa ireo ankizy voa izay efa mihoatra ny folo hatreto.
Manoloana izany dia misy amin’ireo sekoly tsy miankina izay efa nampianatra ireo mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana toy ny CEPE sy ny BEPC no nanapa-kevitra ny hampiato ny fampianarana ao aminy nanomboka omaly zoma 08 May. Anisan’izany ny kolejy iray eny Ambohimanarina Boriborintany fahaenina eny izay nanao fampilazana ny ray aman-drenin’ireo mpianatra mihitsy ary nanamafy izany tamin’ny alalan’ny tambazotran-tserasera « facebook ». Nankasitraka io fanapahan-kevitry ny sekoly io moa ny Ray aman-drenin’ny mpianatra tamin’ny ankapobeny. Mbola kely mantsy ireo mpianatra ka mety tsy hahafehy ny fifampikasohana izay tena mamindra haingana ity tsimok’aretina ity.